တွေးတောဆင်ခြင်ဆရာလေ့ကျင့်ရေး Rishikesh india | ယောဂဆရာအိန္ဒိယသင်တန်း
500 နာရီတရားအားထုတ်ရန်ဆရာလေ့ကျင့်ရေးအိန္ဒိယ (အဆင့်မြင့်)
60 Hour Chakra ဘာဝနာဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း
200 Hour Hatha Yoga ဆရာသင်တန်း
200 နာရီ Transformational ယောဂဆရာသင်တန်း
200 နာရီယောဂဆရာသင်တန်း Rishikesh
Transformational 100 နာရီယောဂဆရာသင်တန်း
ယောဂ Nidra TTC
Yoga Nidra ဆရာသင်တန်း Rishikesh အိန္ဒိယ
150 နာရီအဆင့်မြင့်ယောဂ Nidra ဆရာသင်တန်း
Yoga Nidra ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Yoga Essence အဖွဲ့အကြောင်း
Yoga Essence Rishikesh အကြောင်း
သင်၏ခန္ဓာကိုယ် - အသက်ရှူ - နှလုံးကိုပြုပြင်ပါ
ယောဂ၊ တရားအားထုတ်ခြင်း၊ ယောဂ Nidra နှင့်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းတို့၏အနှစ်သာရကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဆရာသင်တန်းများမှတဆင့်ဟိမဝန္တာတောင်ခြေရှိ Yoga Essence Rishikesh မှကြိုဆိုပါသည်။
200 နာရီဘာဝနာဆရာသင်တန်း Rishikesh India
200 Hour Yoga Nidra အိန္ဒိယသင်တန်းပေးသူ (Level-1,2,3)
200 Hour Hatha Yoga ဆရာသင်တန်း Rishikesh India
200 နာရီပြည့်စုံသောယောဂဆရာသင်တန်း Rishikesh India
200 နာရီ Transformational ယောဂဆရာအိန္ဒိယသင်တန်း,
၃၀၀ နာရီယောဂဆရာသင်တန်း Rishikesh India (အဆင့်မြင့်)
အတွေ့အကြုံ & ဘဝ - အသွင်ပြောင်းသင်တန်းများ
Body-Mind-Heart ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ဝှက်ထားသောဘဝရှုထောင့်များကိုမည်သို့စူးစမ်းလေ့လာရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားအားထုတ်ရန်ဆရာဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်ဘာဝနာကိုလေ့လာရန်ကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့လာပါ။
ယောဂဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း Rishikesh India
ယောဂနှင့်ဘဝအသွင်ပြောင်းခြင်း၏စစ်မှန်သောအနှစ်သာရကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ၊ ဘက်စုံနေထိုင်မှုဘဝ၏ရွှင်လန်းမှုကိုခံစားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယောဂဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်ယောဂသင်ကြားခြင်းစွမ်းရည်ကိုလေ့လာပါ။
Yoga Nidra ဆရာသင်တန်း Rishikesh India
နက်ရှိုင်းစွာကုသခြင်းနှင့်ဖြေလျော့ခြင်းအတွေ့အကြုံများကိုရယူပါ။ ယောဂနိဒြာအားသင်ကြားရန်အဆင့်ဆင့်လေ့လာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Yoga Nidra ဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းသို့တက်ရောက်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ် - စိတ် - နှလုံးကိုမည်သို့ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ရမည်ကိုသင်ယူပါ။
Yoga Essence Rishikesh သည်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး Yoga Alliance ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောယောဂကျောင်းဖြစ်သည် (RYS)နှင့် Yoga Alliance အားစဉ်ဆက်မပြတ်ပညာရေးပံ့ပိုးသူ (YACEP)။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောဂ၏ဗဟုသုတနှင့်သိပ္ပံပညာကိုပျံ့နှံ့စေရန်၊ တရားအားထုတ်ခြင်းအားဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောဆရာ ၀ န်သင်တန်းများမှတစ်ဆင့်အမျိုးမျိုးသောယောဂလေ့ကျင့်မှုများ၏ဘက်စုံ၊ အတွေ့အကြုံနှင့်အသွင်ပြောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုဝေမျှပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းသူတိုင်းအားစစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံများကိုပို့ဆောင်ပေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကတန်ဖိုးကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်အထူးပြုသင်တန်းများပို့ချပေးသည်။
နာရီ ၁၀၀ နာရီဘာဝနာဆရာလေ့ကျင့်ခြင်း
နာရီ ၅၀၀ ဘာဝနာဆရာသင်တန်း (အဆင့်မြင့်)
နာရီ ၂၀၀ Yoga Nidra ဆရာသင်တန်း (အဆင့် ၁၊ ၂၊ ၃) ။
နာရီ ၂၀၀ ဟတ်ထရောဆရာသင်တန်း
နာရီ ၂၀၀ ဘက်စုံယောဂဆရာသင်တန်း
200 နာရီ Transformational ယောဂဆရာသင်တန်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများတွင်ရှေးခေတ်နှင့်ခေတ်သစ်အမျိုးသားများ၏စိတ်၊ နေထိုင်မှုပုံစံ၊ ဘဝပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်ရှေးခေတ်နှင့်ခေတ်ပြိုင်ဆရာများစွာ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်များကိုကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ထားပြီးကျောင်းသားများကိုအတွင်းငြိမ်သက်မှု၊ လက်ခံမှု၊
Rishi Patanjali ၏အစပိုင်း၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းယောဂ၏ခြေလက်အင်္ဂါရှစ်ခု၏လက်တွေ့ကျသောအတွေ့အကြုံကိုရရှိရန်အခြေခံနှင့်ခိုင်မာသောအခြေခံကိုတည်ဆောက်ရန်သင်ယူမှုနှင့်အသွင်ပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်စေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားမှုများကိုစိတ်အေးအေးနှင့်ရွှင်လန်းစွာဖြင့်ပို့ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျင့်ဝတ်များအားလုံးကိုရှေးခေတ်ယောဂသိပ္ပံနှင့်ခေတ်သစ်ကုသမှုသိပ္ပံပညာ၏အခြေခံသဘောတရားများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကြားသည်။
ယောဂကျင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအတွေးအခေါ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ ယောဂ၏စင်ကြယ်သောအနှစ်သာရ.
Ashram ပတ် ၀ န်းကျင်
ယောဂအနှစ်သာရအားဖြင့် Rishikesh ၏စွမ်းအင်တစ်ခုလုံးသည်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှအရည်အသွေးပြည့်ဝသောအတွေ့အကြုံများကိုဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားမှုများ၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အစားအစာ၊ ယောဂနှင့်တရားအားထုတ်ရန်ခန်းမများနှင့်အတူမှန်ကန်သောယောဂပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျောင်းသားများအားလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်ဘ ၀ ၏အသွင်ပြောင်းသောရှုထောင့်အားပေးအပ်ရန်အတွက်အရေးပါသောအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှလုံးသားအတွက် ashram ဖြစ်ပြီးကျောင်းသားများသည်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၊ စိတ်နှင့်စိတ်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာရန်ခွင့်ပြုသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကဲ့သို့သောစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းထားသည့် ashram ကိုပေးသည်ဟုယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုဆိုသောမိသားစုကဲ့သို့သောအဖွဲ့သည်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တိုးတက်မှုကိုကူညီရန်နှင့်ကူညီရန်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိပြီး၊
Yoga Essence Rishikesh သည်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကာလအတွင်းသင်၏နေထိုင်ရန်သပ်သပ်ရပ်ရပ်သန့်ရှင်းပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောနေရာထိုင်ခင်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသည်ဂန်ဂါမြစ်နှင့်မီတာ ၂၀၀ အကွာတွင်တည်ရှိသော Lakshman Jhula တည်ငြိမ်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောနေရာတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေသောဟိမဝန္တာတောင်တန်းများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသာယာလှပသောစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးတို့ကဝိုင်းရံထားသည်။ ဤခမ်းနားထည်ဝါသောတောင်တန်းများနှင့်ဂင်္ဂါဘက်မှလန်းဆန်းအေးမြသောလေပြေစီးဆင်းမှုသည်သင်တန်းသားများကိုသဘာဝအပန်းဖြေမှုနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်မှုအတွက်ကူညီပေးသည်။
အခန်းများအားလုံးသည်ခေတ်မီသောတပ်ဆင်ထားသည့်ရေချိုးခန်းများ၊ အပူနှင့်အအေးခန်းများ၊ လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသောအခန်း၊ ၀ ိုင်ဖိုင်၊ သောက်ရေသန့်များစသည်တို့တပ်ဆင်ထားသည်။
Samyak Aahaar - မှန်ကန်ပြီးမျှတသောအစာသည်ယောဂလေ့ကျင့်မှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောဂအတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန်အရသာရှိသောအာဟာရပြည့်ဝသော၊ များစွာသောအစားအစာပစ္စည်းများသည်အိန္ဒိယ၏နေရာဒေသအမျိုးမျိုးမှလူကြိုက်များသောရိုးရာချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်သည်။ ဟိမဝန္တာဒေသရှိအတွေ့အကြုံရှိထမင်းချက်များကအစားအစာများကိုရိုးရှင်းသောအိမ်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့်အခြားပစ္စည်းများကဲ့သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်ပြီးရာသီအလိုက်နှင့်ဒေသအလိုက်အသစ်ဝယ်ယူထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာများသည်ထူးခြားသောပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် yogic အစဉ်အလာ၏တန်ဖိုး၊ Ayurveda နှင့်သဘာဝအစားအစာများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသမှုတန်ဖိုးနှင့်ခေတ်မီမျှတသောအစားအစာတို့၏အာဟာရတန်ဖိုးတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
၏ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ယောဂ TTC & ယောဂ Nidra TTC
၏ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း တရားအားထုတ်ရန် TTC
အိန္ဒိယ Yogic စွမ်းအင်နယ်ပယ်နှင့်တုန်ခါနေသည်။ နှစ်ပေါင်းတစ်သောင်းနီးပါးခန့်တွင်ရှာဖွေသူများသည်ဤနေရာတွင်အမြင့်ဆုံးသတိစိတ်ပေါက်ကွဲမှုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သဘာဝအားဖြင့်၎င်းသည်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းကြီးမားသောစွမ်းအင်ကဏ္ created ကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့တုန်ခါမှုကသက်ရှိတွေလေ။ သငျသညျအခြို့သောသိနားလည်နိုင်စွမ်း, ဒီထူးဆန်းတဲ့ပြည်ကိုဝန်းရံမမြင်ရတဲ့လက်ခံရရှိရန်အချို့သောစွမ်းရည်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဒီမှာဘက်စုံယောဂဆရာလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်တရားအားထုတ်ခြင်းဆရာလေ့ကျင့်ခြင်းများပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း၊ ခရီးသွားရင်းဖြစ်သောအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အားလုံးနေရာတစ်ခုလုံးတွင်တစ်ခုသာအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ သတိထား! သတိပေး!
RISHIKESH နက်ရှိုင်းသောဟိမဝန္တာသို့ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏အတွင်းပိုင်းခရီးကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာသွားရန်ကြိုးစားသူများအတွက်တံခါးပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို“ Tapo-Bhumi” ဟုလူသိများသည်။ ရှေးခေတ်ကတည်းကယောဂကျင့်ခြင်းနှင့်သူတော်စင်များနှင့်သူတော်စင်များအကြောင်းကိုတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၏လက်တွေ့အခြေအနေကိုဆိုလိုသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောပညာရှိများနှင့်သူတော်စင်များသည်မြင့်မားသောဗဟုသုတနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနားလည်ရန်ရှာဖွေခြင်းအတွက်တွေးတောဆင်ခြင်ရန် Rishikesh သို့သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါယောဂစွမ်းအင်လယ်ကွင်းများနှင့်မြေ၏ဝိညာဉ်ရေးရာပါဝါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းခရီးပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းခရီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 200 နာရီယောဂဆရာလေ့ကျင့်ရေးနှင့် 200 ဘာဝနာဆရာလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကဲ့သို့သောအသွင်ပြောင်းသင်တန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ယောဂ Essence RISHIKESH?
Yoga Essence Rishikesh တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောဂ၊ ယောဂနိဒီရာနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဘဝအသွင်ပြောင်းအရည်အသွေးများကိုအထူးတန်ဖိုးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးသောအလေ့အကျင့်များ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များကိုသာအာရုံစိုက်မည့်အစားကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအားငြိမ်းချမ်းသော၊ ရွှင်လန်းမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသောဘ ၀ အတွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များရရှိစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များကို“ စစ်မှန်သော ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်ဘဝအသွင်ပြောင်းခြင်း” ဟုခေါ်ဆိုကြသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှယောဂချစ်သူများအတွက်နေရာဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏စိတ် - စိတ် - နှလုံး - အလွှာအတွင်း၌သတိရှိခြင်းတိုးချဲ့ခြင်းအတွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်လုံခြုံစိတ်ချရသော၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ယောဂကျောင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောယောဂကျင့်စဉ်များဖြစ်သောယောဂနိဗ္ဗာန်၊ တရားရှုမှတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ယောဂဆရာလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များအပြင်၊ yoga nidra ဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း၊ yoga nidra ဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ (အဆင့် ၁၊ အဆင့် ၂၊ အဆင့် ၃)၊ တရားအားထုတ်ရန်ဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ (၁၀၀၊ ၂၀၀၊ နာရီ ၅၀၀) နှင့်အခြားအရာများစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 200 Hour Yoga Teacher Training နှင့် 200 Hour Meditation Teacher Training သင်တန်းများသည်အခြားယောဂဆရာများလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများထက်အထူးတန်ဖိုးရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပို ၅၀ Yoga Nidra ဆရာသင်တန်း (အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်) ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကို yogic လေ့ကျင့်မှုများရှိသူများကိုကူညီရန်ခွင့်ပြုသည်။
အိန္ဒိယရှိကျောင်းသာအဆင့်မြင့် Yoga Nidra ဆရာသင်တန်းပေးခြင်း
ဦး ဆောင်ပြီးတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ယောဂ Nidra ဆရာ
ယောဂဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါဟာ Yoga Essence Rishikesh မှာနာရီ ၂၀၀ တရားအားထုတ်ရန်ဆရာလေ့ကျင့်ရေးနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကတခြားကျောင်းတွေထက်ကွဲပြားတဲ့တရားအားထုတ်ရန်နည်းစနစ်တွေကိုလေ့လာချင်တယ်။ ငါတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောတရားအားထုတ်ခြင်းအလေ့အကျင့်များစွာရှိရုံသာမကကျွန်ုပ်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်လာသည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငါတကယ်ဘယ်သူကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ငါ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ခရီးကိုနက်ရှိုင်းစေခဲ့တာလဲ။ ပရိုဂရမ်ငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုအတန်းဖော်တွေနဲ့ရင်းနှီးခွင့်ရစေပြီးအကောင်းဆုံးဆရာတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးလမ်းညွှန်မှုပေးတယ်။ ဆရာတွေကသူတို့သင်ပေးတဲ့အတိုင်းနေထိုင်နေကြတယ်။ အခုဆိုရင်ယောဂဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပိုပြီးနားလည်လာပြီ။ ယခုငါဝမ်းမြောက်သောစိတ်၊ သီချင်းဆိုခြင်းနှင့်ကခုန်ခြင်းများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်၏မိခင်နိုင်ငံတွင်ယောဂကိုမည်သို့သင်ကြားရမည်ကိုငါသိပြီ။ ငါသည်ဤသင်တန်းနှင့်ကျောင်းအမှန်တကယ်အကြံပြုပါသည်။ ကျွန်တော်လိုက်နာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Namaste! မာရီယို။
ကျွန်ုပ်သည် @ Yoga Essence Rishikesh ၏နာရီ ၂၀၀ ပြည့်ပြည့်စုံသော Yoga Teacher သင်တန်းသို့တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရာကိုစကားလုံးများဖြင့်ဖော်ပြမထားပါ။ ၎င်းသည်ဘဝ၊ စိတ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အကြောင်းမှော်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်ပုံ၊ သင်ဟာခံစားမှု၊ ပြသမှု၊ ဖော်ပြရန်၊ ကခုန်ရန်၊ ငိုရန်၊ အော်ဟစ်ရန်၊ ခုန်ရန်၊ ငါကသူ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကံကောင်းတယ်၊ မင်းကယောဂဆရာဖြစ်ချင်ရင်သူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရင်ကူညီဖို့လိုတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်မတည်ငြိမ်လျှင်သင်မည်သို့အခြားသူများကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်သနည်း။ ငါကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသွင်ပြောင်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့သူတစ်ပါးကိုခြွင်းချက်မရှိအမှန်ချစ်ဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ စုစုပေါင်းနှုန်းဖြင့် Yoga Essence မှရရှိသောအရာများအတွက်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါယောဂခရီးကိုအစပြုခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုငါသိသော်လည်းဤစတင်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ရှိသောအရာကိုသိခြင်းနှင့်ယောဂနှင့်တရားအားထုတ်ခြင်းသို့မည်သို့သွားနိုင်ကြောင်းများစွာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Namaste!
ပြောင်းလဲမှု၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာအတွေ့အကြုံနှင့်အခြေအနေတိုးတက်မှု
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ Yoga Capital, Rishikesh ငါ Swami Samarth ၏မေတ္တာပါသောလမ်းညွှန်မှုဖြင့် Yish Essence, Rishikesh ရှိနာရီ ၂၀၀ ခန့် Yoga ဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုတက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်ယောဂ၏အနှစ်သာရကိုကျွန်ုပ်ခံစားနိုင်သည်။ Jas၊ Anoop, Dhiraj, Ranjan, Prasad တို့၏အမြဲတမ်းဖော်ရွေပြီးပံ့ပိုးကူညီသည့်အဖွဲ့သည်နာရီပေါင်း ၂၀၀ ယောဂဆရာလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မြတ်သော Ganga စီးဆင်းမှုနှင့်အတူတူပင်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်တန်းကိုယ်တိုင်ကကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းထက်သာလွန်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အခွင့်အရေးရခဲ့သည်။ အပတ်စဉ်ပိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထုပ်ပိုးထားသောအချိန်ဇယား၏နောက်ကွယ်တွင်အုပ်စု၏စွမ်းအင်ကိုတစ် ဦး ချင်းအဆင့်တွင်အသွင်ပြောင်းသောကြိမ်နှုန်းကိုရရှိရန်နဂိုအတိုင်းထားရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျောင်း၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်တွင်လက်မှတ်နှင့်အတူသင်တန်းပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်လက်ဆောင်များကိုယူဆောင်လာသည်နှင့်အမျှမတူညီသောတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းအလေ့အကျင့်များမှတဆင့်အတွင်းကြီးထွားမှု၏ 'ကျော်ဖြတ်မှုအတွေ့အကြုံ' ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်“ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားမှုအပြီးတွင်ပါဝင်သူသည်အကောင်းဆုံးသောဆရာဖြစ်နိုင်သည်” သည် Yoga Essence Rishikesh ရှိ Yoga Teacher Training ၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ကျောင်းနှင့်ကျောင်းတွင်ပါ ၀ င်နေသူများအားဘက်စုံကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်စွာဆုတောင်းပေးသည်။ ငါနေတဲ့တလျှောက်လုံးမှာသူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ထောက်ခံမှုတွေအတွက်အဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုငါတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Pranam အချစ်
Yoga Essence မှာနေရင်းနဲ့သင်ယူရင်းကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကဘဝကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အတွင်းပိုင်းခရီးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်မှန်ကန်သောကျောင်း / Ashram / အကယ်ဒမီကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရှာဖွေပြီးနောက် Yoga Essence ကိုတွေ့ရှိရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ ကျောင်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော၊ အလွန်သန့်ရှင်းသော၊ အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာအသင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းကူညီရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ Yoga Essence မှသင်ကြားပို့ချသောနည်းစနစ်များသည်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံနှင့်အလွန်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ Swami Samarth ငါပြောတာကမင်းဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊ သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည်အလင်းများလာပြီးလာမည့်အနာဂတ်တွင် Yoga Essence သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ယုံကြည်သည်။ ငါပေါင်းထည့်ရမှာက Joy, Prasad နဲ့ Ranjan တို့ပါ ၀ င်တဲ့အဖွဲ့ဟာအံ့သြစရာကောင်းပြီးဒီလူတွေအားလုံးဟာချစ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ နာရီ ၂၀၀ ခန့်ဘာဝနာဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းသည်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်မျှော်လင့်ချက်အားလုံးနှင့်ပြည့်စုံသည်။ သင်တန်းတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည်တရားအားထုတ်ရန်နည်းစနစ်များ၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့်ထိတွေ့နေပြီး၎င်းသည်အတော်လေးလန်းဆန်းစေသောကြောင့်ရှာဖွေသူ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံသည်။
STEP METHODOLOGY ဖြင့် STEP ကိုလေ့လာရန်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည်
Yoga Nidra ဆရာလေ့ကျင့်ရေးသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကြောင့် ပိုမို၍ အပန်းဖြေအနားယူရန်နှင့်အစတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အတော်လေးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်နေ့များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏ပြissuesနာများ၏ရင်းမြစ်အကြောင်းရင်းများကိုနားလည်ပြီးအလေ့အထများသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Yoga Nidra အစည်းအဝေးများနှင့်တက်ကြွစွာတက်ကြွစွာတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းအလေ့အကျင့်များကြောင့်သူတို့အားပြန်လွှတ်ပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာရိုးရာ Yogic သိပ္ပံနှင့်ခေတ်မီဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံရှုထောင့်အရ Yoga Nidra အလေ့အကျင့်၏ခြေလှမ်းများကိုနားလည်ပြီးလေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်ခံစားခြင်းတို့အတွက်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် passive နှင့်တက်ကြွသောယောဂကျင့်ခြင်းနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းတို့၏ကောင်းမွန်သောမျှတမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကြားမှုများသည်အလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတို့အားသင်ကြားရန်ကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအလေ့အကျင့်သို့သွားရန်ကူညီခဲ့သည် အများကြီးတန်ဖိုးထားခဲ့ဘာဝနာ & ယောဂဆရာများနှစ် ဦး စလုံးအားဖြင့်သင်ကြားမှုအတွက်ကြင်နာမှုနှင့်နူးညံ့အများကြီး။ အစားအစာနှင့်ဝန်ထမ်းများအလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်ဖော်ရွေခဲ့ကြသည်။ အလွန်အရသာရှိတဲ့နှင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အစားအစာ, တကယ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံး၊ စိတ်ကိုနားလည်ခြင်း
မေလ 3, 2020မေလ 5, 2020yogaessencerishikesh
Kirtánယောဂ | Kirtan ဘာဝနာ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2020ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2020မင်္ဂလာပါ
မန္တာယောဂ | မနောတရားအားထုတ်ခြင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2020မေလ 5, 2020မင်္ဂလာပါ
သင်၏နာရီ - ယောဂဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း ၂၀၀ ၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
မေလ 28, 2019မေလ 28, 2019မင်္ဂလာပါ
မေလ 18, 2019ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2020မင်္ဂလာပါ
VIGYAN BHAIRAV TANTRA - တရားအားထုတ်ရန်နည်းစနစ်စွယ်စုံကျမ်း
ဧပြီလ 30, 2019ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2020မင်္ဂလာပါ
Raja Yoga ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ Raja Yoga နှင့် Hatha Yoga နှိုင်းယှဉ်မှု
ဧပြီလ 15, 2019မေလ 5, 2020မင်္ဂလာပါ
ဟိုတယ် Vishla နန်းတော်,
အောက်ပိုင်း Tapovan (Dewa နောက်ကွယ်မှ),
Rishikesh, Uttarakhand, အိန္ဒိယ, 249192
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေး: [အီးမေးလျ protected]
ကျွန်တော်တို့ကို Call: (+ 91) 7409349919 / (+ 91) 8954559984
ကျောင်းသား Yoga Essence ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်
200 နာရီ Hatha Yoga ဆရာသင်တန်း Rishikesh
နာရီ ၂၀၀ လုံးလုံးပါဝင်သည့်ယောဂဆရာသင်တန်း Rishikesh
နာရီ ၃၀၀ နာရီ - ယောဂဆရာမသင်တန်း Rishikesh India
၀၅၀ နာရီယောဂနီဒရာဆရာအိန္ဒိယသင်တန်း (အဆင့် - ၁)
၁၅၀ နာရီယောဂနီဒရာဆရာအိန္ဒိယသင်တန်း (အဆင့် - ၂ နှင့် ၃)
200 နာရီဘာဝနာဆရာလေ့ကျင့်ခြင်း Rishikesh India
နာရီ ၅၀၀ ဘာဝနာဆရာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းအိန္ဒိယ (အဆင့်မြင့်)
100 နာရီဘာဝနာဆရာလေ့ကျင့်ခြင်း Rishikesh India
နာရီ ၁၀၀ နာရီပြည့်ပြည့်စုံသောယောဂဆရာသင်တန်း
08 Days ဘက်စုံယောဂဆုတ်ခွာ
တိတ်ဆိတ်စွာတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၏ယောဂအရေးပါမှုမေလ 3, 2020
Kirtánယောဂ | Kirtan ဘာဝနာဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2020
မန္တာယောဂ | မနောတရားအားထုတ်ခြင်းဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2020
သင်၏နာရီ - ယောဂဆရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း ၂၀၀ ၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမေလ 28, 2019
ဘာဝနာအကြောင်းနားလည်မှုလွဲခြင်းမေလ 18, 2019
ယောဂဆိုတာဘာလဲ - ဒaနိကဗေဒတစ်ခုသို့မဟုတ်စည်းကမ်းဇူလိုင်လ 10, 2018
Chakra တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း - စိတ်ဝိညာဉ်ရေးရာစွမ်းအင်စင်တာများတွင်တရားအားထုတ်ခြင်းအလေ့အကျင့်ဧပြီလ 14, 2019
Ujjayi Pranayama: အောင်ပွဲခံအသက်ရှူခြင်းအလေ့အကျင့်ဧပြီလ 7, 2019
Transformational Yoga: ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် Master Keyနိုဝင်ဘာလ 16, 2018
PRANAYAMA ၏အကျိုးကျေးဇူးများဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2018
ယောဂအနှစ်သာရ Rishikesh © 2019 | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး